कलाकार निशा घिमिरे सहयोगको लागि हार्दिक अपिल - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७८ जेठ २९ गते १४:५६ मा प्रकाशित
नेपाली कला क्षेत्रमा जम्दै गरेको एउटा नाम निशा घिमिरेको यो अवस्था देख्दा निःशब्द छु । अमेरिकामा बसोबास गर्ने कलाकार रिचा घिमिरेले कलाकारितामा उच्च शिक्षाको क्रममा भारतमा सवारी दुर्घटनामा परि उपचारको अभावले यो अवस्थामा पुगेको देख्दा साह्रै दुखी छु भनि लेखेकी छिन ।
अमेरिकाको बाल्टिमोरमा बस्दै आएकी कलाकार ऋचा घिमिरेले उनको सहयोगको लागि गो फन्ड खोलेकी छिन । गो फन्ड जुन १२ शनिबारका दिन खोलिएको हो ।
पहिले र अहिलेको यो अवस्था देख्दा मेरो मात्र होइन देख्नी जो कोहीको आँखा रसाउछ होला शायद । उनले अगाडी भनिन ,छोरीको भेदभावमा सम्भ्रान्त र शिक्षित परिवारको छोरीले त कति विभेद भोग्नुपर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा, जहाँ छोरीको सडक दुर्घटना भो बर्षौ देखि उपचार आदीको लागी आफ्नो सम्पत्ति, घर्,उर्जा,समयलाई खर्चेर, आज ऐलानी जग्गामा जस्ता पाताले छाएको घरमा आफ्नो छोरीको सेवामा आफ्नो सबै कुरा सुम्पेका ती बुवा आमा प्रति हामी नतमस्तक छौं।
निशाको उपचार को त जोहो भो ! कठै त्यो बुवाको बुढेसकालको लगानी हामीले केही गरौ । उहाले सन्तानको लागी सबै खर्च गर्नु भो । अब हामी सबै एक जुट भएर आफूले सक्दो सहयोग गरौं !
सानो, चाहे ठूलो, त्यो कुरा ले महत्व राख्दैन जे होस सहयोग गरौ!
सहयोग गर्न चाहना राख्नु हुनेले यहाँ थिच्नु होला :